Ungachengetedza sei gasi solenoid vharafu? - Nhau - Ningbo Aokai Security Technology Co., Ltd
Gasi Solenoid Safety Valve
Gesi Solenoid Valve
Thermocouple yeGesi Ovheni
Musha > Nhau > Vadivelu Comedy News
Ungachengetedza sei gasi solenoid vharafu?
1. Mumamiriro ekushanda, kushanda kwekushanda uye kushanda ambient tembiricha yegasi solenoid valve inogona kuchinja, saka zvakakosha kuendesa kuchengetwa uye kuchengetedza gasi solenoid valve zvigadzirwa. Nenguva tsvaga shanduko yenzvimbo yekushanda yegasi solenoid valve kudzivirira tsaona.
2. Kuti uve nechokwadi chekuchena kwegasi solenoid valve, kuiswa kwesefa screen kunoderedza kupinda kwetsvina muvhavhavha ye solenoid, iyo inobatsira kuderedza kupera kwezvikamu zvemagetsi uye kuwedzera hupenyu hwebasa regesi solenoid. vharafu.
3. Yezve gasi solenoid vharuvhu zvigadzirwa zvinoiswa mushandiswazve, iyo yekuyedza bvunzo ichaitwa pamberi pebasa basa, uye condensate iri muvhavha inozoburitswa.
4. Pamusoro pezvigadzirwa zvegesi solenoid valve zvakashandiswa kwenguva yakareba, mukati uye kunze kwezvikamu zvevhavha ye solenoid, kunyanya zvikamu zvakakosha zvakakosha, zvinoda kugadziriswa zvakadzama.
5. Kucheneswa kwegasi solenoid valve haifaniri kunge yakanyanyisa, asi haifaniri kuregererwa. Kana iyo gasi solenoid valve chigadzirwa chinowanikwa chisina kugadzikana kana zvikamu zvakapfekwa, iyo solenoid valve inogona kucheneswa kana ichinge yabviswa.
6. Kana iyo gasi solenoid vharuvhu isisashandiswe munguva pfupi, mushure mekunge vharuvhu yabviswa mupombi, kunze nekunze kwevhavha yegesi solenoid inofanira kucheneswa nekupukuta kunze nekushandisa mweya wakamanikidzwa mukati.
7. Kuchengetedza nguva dzose kuchaitwa kune gasi solenoid valve zvigadzirwa, zvakadai sekubviswa kwesundries uye kupfeka kwekuisa chisimbiso pamusoro. Kana zvichidikanwa, zvikamu zvegasi solenoid valve zvichatsiviwa.
Kana paine kukuvadza kwakasimba kunokuvadza, iyo gasi solenoid vharafu inogona kuvharwa otomatiki, uye manyorerwo kupindira kunodiwa kuti uvhure vharuvhu. Iyo gasi solenoid vharuvhu inofanirwa kudzoreredzwa nguva zhinji panguva yekushandiswa kwezuva nezuva. Kana paine chero kukanganisa kunowanikwa, ndapota nyorera vashandi kuti vagadzirise nekukurumidza sezvazvinogona.
Previous:Nzira yekusiyanisa thermocouple modhi
Zvadaro:Zivo ye thermocouple uye chengetedzo solenoid vharafu yegesi chitofu
Copyright © 2021 Ningbo Aokai Security Technology Co, Ltd. - Gesi Solenoid Valve - Kodzero dzese dzakachengetedzwa.